Wafdi ka socda Mareykanka oo booqasho qarsoodi ah ku tegay Muqdisho - Awdinle Online
Magaalada Muqdisho ayaa gelinkii dambe ee shalay soo gaaray wafdi ka socday dowladda Mareykanka oo uu hoggaaminayay Sii-hayaha Xoghayaha Difaaca Mareykanka, iyagoona lagu soo dhaweeyay Caasimadda dalka.
Sii-hayaha Xoghayaha Difaaca Mareykanka Christopher Miller oo saacado kooban ku sugnaa Muqdisho ayaa kulan gaar Garoonka diyaaradaha Aadan Cadde kula qaatay xubno ka mida Ciidamada Mareykanka, iyagoona kala hadlay arrimo aan faah faahin laga helin.
Telefashinka Mareykanka ee CNN ayaa shaaciyay in Sii-haaye Christopher Miller uu booqasho qorsoodi ah ku yimid Magaalada Muqdisho, isla markaana uu dib uga laabtay Caasimadda dalka, kadib markii uu kulan la qaatay xubno ka tirsan Mareykanka.
Xoghayaha ayaa ka soo safray Saldhigga Ciidamada Mareykanka ee Jabuuti, waxaana imaatinkiisa Muqdisho ku soo aaday, iyadoo Donald Trump uu shaaciyay inuu Soomaaliya kala baxayo Ciidamada ku sugan Soomaaliya oo gaaraya ku dhowaad 700 askari.
Waa Mas’uulkii u horeeyay Wasaaradda Difaaca dalka Mareykanka ka socda oo booqasho ku yimaada Soomaaliya, sida uu shaaciyay Telefashinka Mareykanka ee CNN.
Previous articleMusharixiinta Madaxweynaha oo War kasoo saaray qaraxa Muqdisho
Next articleOdayaasha Koonfur Galbeed oo ku dhawaaqay digniin la xiriirta doorashada